अठार बर्षिया एमा राडुकानुको हातमा ३० करोड: हामीले के सिक्ने? - लण्डन काठमाडौँ
संसारी चलन बिचित्र भने जस्तो धेरै फरक भूगोल र परिवेशमा रोमानियन बाबु र चाइनिज आमाबाट क्यानडामा यति प्रतिभाशाली एमा राडुकानु (Emma Raducanu) को जन्म हुन गयो । सुन्दै आश्चर्य लाग्ने र रमाईलो कुरा, कसलाई थाहा थियो १८ बर्षको कलिलो उमेरमा एमाले ३० करोड रुपियाँ (१८ लाख पाउण्ड) को एकमुस्ट पुरस्कार पाउनेछिन । यो कल्पना नभएर एक वास्तविकता भएको छ । त्यसमा पनि, यो त उनको पुरस्कारको एकमुस्ट रकम हो, यस बाहेक उनका अरु आयहरु अकल्पनीय हुन्छन नै । उनी नि:शन्देह सुपरस्टार हुनापुगेकी छन भने ब्रिटेनकी महारानीले गरेको प्रसंसा संगै एम बी इ (MBE) जस्तो सम्मानजनक मानपदवी पाउने बलियो सम्भावना रहेको बताईन्छ ।
यहि सेप्टेम्बर १३ मा युएस ओपन च्याम्पिअन (टेनिस) मा दुवै एकल पुरुष वा महिला मध्येबाट उनी ब्रिटिश नम्बर एक हुन पुगिन । एकल तर्फ वोर्ल्ड नं २३ तथा ब्रिटिश नं एक हुन पुगेकी एमा सन् २००२ मा रोमानियन बुबा र चाईनिज आमाबाट क्यानडामा जन्मिएपछी २ बर्षको उमेरमा ब्रिटेन बसाई सरेकी हुन् । आज एमाले ब्रिटिश नागरिक भएको नाताले यस देशलाई खेलको माध्यमबाट गौरवान्वित मात्र बनाइनन् उनले पुरै विश्वलाई चकित बनाएकी छन् । जीवनमा पहिलो पटक पांच बर्षको उमेरमा एमाले युकेको ब्रोम्ली टेनिस सेन्टरमा टेनिसको राकेट उचालेर यो खेलमा प्रवेश गरेकी थिईन । ‘उदेश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक’ भने जस्तो यो कलिलो उमेरमा यत्रो ठूलो साहस, हिम्मत, लगनशीलता अनि संकल्प! खेलकुदमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा मान्छेले यस्ता उदेश्य राख्नु पर्छ । यो हालको ज्यादै ठूलो पुरास्कारको रासी मात्र ठूलो कुरा नभएर इज्जत, गौरव र प्रेरणाका रुपमा यसले ज्यादै ठूलो महत्व राख्दछ । अठार बर्षकै उमेरमा लाखौ लाख दर्शक माँझ प्रसंशा र तालि पाउँदा उनले कस्तो उत्साह अनि रमाईलो महसुश गरिन होला हामि सहजै कल्पना गर्न सक्छौं ।
चाख लाग्दो कुरा के छ भने, एमा केहि समय अघिसम्म मात्र पनि यो जित हात पर्ने कुरामा त्यति आशावादी थीइनन् । किनकि उनी अमेरिकाबाट त्यस खेलको कुनै शृंखला पछी घर फर्कन टिकट लिएकी थिइन् । तर आफू अर्को शृंखलामा एक कदम फेरी विजयी भएकोमा सो टिकट रद्द गरी पून: खेलमा सहभागी भएपछी आफ्नी प्रतिद्वन्दी लैला फर्नान्डिजलाई हराउदै फाईनलमा विजयी हुन पुगिन ।
तत्काल वर्ल्ड नं ३३८ रहेकी एमाले यसै बर्षको विम्बल्डन च्याम्पिअनस्मा वाईल्डकार्ड मार्फत इन्ट्री पाएपछि चौथो राउण्ड सम्म पुगेकी थिईन । त्यसको २ महिना पछि २०२१ को युएस च्याम्पिअन्स्को क्वालिफाइङ प्रतिस्पर्धीमा प्रवेश पाएपछि मुख्य ड्रोमा पुग्दै उनी ग्राण्डस्लाम एकल फाईनल पुग्ने पहिलो क्वालिफायर हुन पुगेकी थिइन । फाइनलमा सम्पूर्ण सेटमा विजय हासिल गर्दै उनी ‘ब्रिटिश नं वान’ हुन पुगेकी हुन् । यो कलिलो उमेरमा नै एमाले भर्जिनिया वादेको सन् १९७७ को विम्बल्डन च्याम्पिअन तथा वादेकै सन् १९६८ को युएस ओपनको रेकर्ड तोड्न सफल भएकी छन् । आज विश्व समुदाय, बिशेष गरि ब्रिटेनबासीले एमालाई चौतर्फी सम्मान र प्रसंसा गरेको देख्दा हामी सबै दंग पर्नु स्वाभाविकै हो ।
ब्रिटेनको नाम चम्काउँदै उनीजस्ता लाखौ युवा युवतीहरुकालागि एमा प्रेरणाको एक महान श्रोत बन्न सकेकी छिन । उनको आगामी यात्रा अझ चमत्कारी हुन सक्ने छ । आज हाम्रा समाजका हरेक बाबु–आमाले आफ्ना छोरा–छोरीहरु यस्ता साहस र संकल्पका उदाहरणबाट उत्प्रेरित हुन सकुन भन्ने चाहना राख्छौं भने उनीहरुले पनि एमाको जस्तो साहस, लगानाशिलाता र संकल्प गरेमा अवश्य पनि कुनै न कुनै क्षेत्रमा यस्तै सफलता हात पार्न सक्नेछन ।